Detuo isi okwu, ahịrị na ederede nke si na Excel gaa AutoCAD - Geofumadas
Eprel, 2019 AutoCAD-AutoDesk, ọtụtụ
Enwere m ndepụta nke nhazi na Excel. N'ime ndị a, enwere nhazi X, nhazi Y, yana aha maka njedebe. Ihe m chọrọ bụ ịdọrọ ya na AutoCAD. N'okwu a, anyị ga-eji mkpokọta ederede site na ederede ederede na Excel.
Concatenate iwu maka itinye ihe na AutoCAD
Tebụl e gosiri na eserese ahụ, dịka ị nwere ike ịhụ, gụnyere kọlụm nke aha vertex, mgbe ahụ ngalaba UTM maka ogidi X, Y.
Ihe mbu anyi gha eme bu ichikota nhazi dika iwu AutoCAD na acho ha. Iji maa atụ, iji see isi ihe anyị ga-ewere: POINT coordinateX, coordinateY.
Ya mere, ihe anyị ga - eme bụ itinye kọlụm ọhụrụ na data a na - ekwu, n'ụdị:
Iji mezuo ihe a, emeela m ihe ndị a:
Akpọrọ m sel D4 na aha POINT,
Ejirila m concatenate rụọ ọrụ, eriri nke gụnyere POINT cell, mgbe ahụ, ahapụrụ m ohere iji »«, emesịa m mejupụtara cell B5 yana ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, wee see akara m ejirila m «,», mgbe ahụ enwere m kọntaktị cell C5. Mgbe ahụ, edetuola m maka ahịrị ndị ọzọ.
Detuo isi ihe na Excel
Edegharịwo m ihe dị n'ime kọlụm D ka ederede ederede.
Iji mee ya, pịnye AKWRIKWỌ na ogwe iwu, wee banye igodo. Nke ahụ weliri onye nyocha ahụ ma achọ faịlụ ahụ m kpọrọ geofumadas.scr. Ozugbo ahọpụtara, pịa bọtịnụ mepere emepe.
Na voila, e nwere ebe a na-adọrọ mmasị anyị.
Ọ bụrụ na a naghị ahụ isi ihe ndị ahụ anya, ọ dị mkpa ibugharị na ihe zuru ezu. Maka nke a, anyị dere iwu Mbugharị, tinye, gbasaa, banye.
Ọ bụrụ na isi ihe ahụ apụtaghị ìhè, iwu PTYPE ka emechara, mgbe ahụ, a na-ahọrọ onye ahụ egosiri na oyiyi.
Debe iwu na Excel ma dọpụta polygon na AutoCAD
Iji see polygon ọ ga-abụ otu mgbagha. site na iche na anyị ga-ejide iwu PLINE, wee chịkọta njikọta yana n'ikpeazụ iwu CLOSE.
Anyị ga-akpọ edemede a geofumadas2.scr, na mgbe anyị mere ya, anyị ga-enwe akara nke ịbịaru. Ahọrọ m agba odo iji hụ ihe dị iche na ogwe aka uhie.
Debe iwu na Excel ma hụ oghere na AutoCAD
N'ikpeazụ, anyị kwesịrị ịkọwa akụkụ Akwụkwọ Nsọ nke kọlụm mbụ dịka nkọwa na mpaghara ọ bụla. Maka nke a, anyị ga-agbanye iwu na usoro a:
JC 374037.8,1580682.4 3 0 1 TEXT
Iwu a na-anọchite anya:
Ọnọdụ nke ederede, na ikpe a ziri ezi, ọ bụ ya mere akwụkwọ ozi J,
Isi okwu nke ederede, anyị họọrọ Center, ọ bụ ya mere akwụkwọ ozi C
Nhazi nkwekọrịta X, Y,
Mgbe ederede ederede, anyị ahọrọ 3,
Ụdị ntụgharị, n'ọnọdụ a 0,
N'ikpeazụ, ederede anyị na-atụ anya na, na nke mbụ, a ga-enwe nọmba 1
Egbasalarị na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ, ọ ga - abụ:
JC 374032.23,1580716.25 3 0 2 TEXT
JC 374037.73,1580735.14 3 0 3 TEXT
JC 374044.98,1580772.49 3 0 3A TEXT
JC 374097.77,1580771.83 3 0 4 TEXT
JC 374116.27,1580769.13 3 0 5 TEXT
JC 374127.23,1580779.64 3 0 6 TEXT
M kpọrọ ya faịlụ geofumadas3.cdr
Emeela m ọrụ agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, iji mara ihe dị iche. Ozugbo emechara edemede ahụ, anyị nwere ederede ederede egosipụtara, nke dị na etiti nhazi.
Download na A na-eji faịlụ AutoCAD mee ihe na ihe atụ a.
Isiokwu ahụ na-egosi otú e si ewu template ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eji template na Excel, emeworị ka ọ bụrụ naanị data ntanetị, Ị nwere ike ịzụta ya ebe a.
Previous Post«Previous Chọta elu nke ụzọ na Google Earth
Next Post Ọganihu na mmejuputa iwu nke BIM - ikpe nke Central AmericaNext »
Otu nzaghachi "Detuo isi ihe, ahịrị na akụkụ nke ịgafe Excel na AutoCAD"
achọrọ m enyemaka
Ekwesịrị m ị nweta akụkụ anọ ga-anọchi anya ngbanye ohere, ha bụ akụkụ anọ nwere etiti na x na y, achọrọ m enyemaka, enwere m data dị oke mma